I-Lumia 950, i-smartphone elungileyo ene Windows 10 Iselfowuni kunokuba besilindele ngaphezulu | Iindaba zeGajethi
I-Lumia 950, i-smartphone elungileyo Windows 10 Iselfowuni kunokuba besilindele ngaphezulu
IiVillamandos | | Iiselfowuni, Reviews
UMicrosoft uqalise iinyanga ezimbalwa ezidlulileyo entsha Lumia 950 kunye I-Lumia 950 XL ngengcinga yokuzama ukwandisa ubukho bayo kwindawo ekuthiwa yeyokugqibela. Ukuqhayisa ngento entsha Windows 10 Iselfowuni nangaphezulu kweempawu ezichanekileyo kunye neenkcazo, ezo zeRedmond zisenokungafezekisi impumelelo ekulindelweyo, kodwa oko akuthethi ukuba olu sapho lwezixhobo zeselfowuni luye kwizona zixhobo zintle kwintengiso.
Namhlanje ngokusebenzisa eli nqaku siza kuzama Hlalutya nzulu kunye neenkcukacha ezinkulu zeLumia 950. Ngaphambi kokuba siqale kwaye njengoko sihlala sisenza, kuya kufuneka sikuxelele ukuba le smartphone isishiyile incasa emilonyeni yethu, nangona kucacile ukuba iMicrosoft iswele izinto ezininzi zokwenza kunye nokupolisha, ngakumbi entsha Windows 10 Iselfowuni, a inkqubo yokusebenza ethi okwangoku ifumane inqanaba elilungileyo, kodwa inokuthi kwaye kufanele ukuba inyuke kakhulu.
5 Windows 10 Iselfowuni kubomi bemihla ngemihla
Uyilo ngokungathandabuzekiyo lelinye lawona manqaku abuthathaka ale Lumia 950 Kwaye zimbalwa kakhulu izinto eziguqukileyo ngokubhekisele kwizixhobo zokuqala eziphathwayo ezisungulwe kwintengiso ngabakwaNokia. Ukuba ikhona into, singatsho ukuba ngokwendlela yoyilo u-Microsoft uhambe inyathelo okanye umva ngasemva.
Ngokukhawuleza xa ususa isixhobo ngaphandle kwebhokisi, uyaqonda ngokukhawuleza ukuba nangona uRedmond efuna ukuba lukhetho lokwenyani ngaphakathi kuluhlu oluphezulu, kodwa bawe ngasemva kakhulu, nge Ukugqitywa kweplastiki kunye nesiphelo sendlela ekuchukumiseni ngokungathandabuzekiyo kukhuphiswano.
Imibala efumanekayo bubungqina obungaphaya bokuba iRedmond ayizibophelelanga kuyilo kwaye kukuba siyifumana ifumaneka ngombala omnyama nomhlophe, imibala isuswe kude kwimibala eqaqambe iNokia ebisoloko isinika yona kwiLumia.
Ukuba siyalibala yonke into esithethile ngayo, uyilo lungaphezulu kokuchaneka ngamanqwanqwa ajikeleziweyo kunye nentuthuzelo enkulu esandleni. Isembozo esingasemva kwesiphelo sinokususwa ngokukhululeka okukhulu okusinika ukufikelela kwibhetri, iiSIM khadi ezimbini esinokuzisebenzisa kunye nekhadi le-MicroSD.
Enye yeenzuzo ezinkulu ze le Lumia 950 kukuba inezibuko eliguqukayo lohlobo C lwe-USB ngokungathandabuzekiyo ivumela imisebenzi enomdla kunye nokukhetha.
Apha sikubonisa ifayile ye- Iimpawu eziphambili kunye nokubalulwa kwale Microsoft Lumia 950;
Imilinganiselo: 7,3 x 0,8 x 14,5 iisentimitha
Umboniso we-5.2-intshi WQHD AMOLED ngesisombululo sama-pixels angama-2560 x 1440, i-TrueColor 24-bit / 16M
Inkqubo: I-Snapdragon 808, i-hexacore, i-64-bit
Ukugcinwa kwangaphakathi kwe-32 GB kuyandiswa ngamakhadi e-MicroSD ukuya kuthi ga kwi-2 TB
I-3 GB ye-RAM
20 megapixel PureView ikhamera yangasemva
Ikhamera yangaphambili ye-megapixel ebanzi engama-5
3000mAh ibhetri (isuswe)
Ukongeza: Uhlobo lwe-C lwe-USB, mhlophe, mnyama, matte polycarbonate
Windows 10 Inkqubo yokusebenza yeselfowuni
Ukuba uyilo lelinye lawona manqaku abuthathaka ale Lumia 950, isikrini sayo yenye yezona zibalaseleyo. Kwaye kunjalo 5,2 intshi kwaye ubukhulu becala olusebenzayo lusinika umgangatho omkhulu, enkosi kuyo Isisombululo se-QHD esine-2.560 x 1.440 pixels.
Ukungena kumanani sinokukuxelela ukuba le Lumia isinika iipikseli ezingama-564 nge-intshi, inani elikude kunelo linikezelwa ngamanye amatheminali afana ne-iPhone 6S okanye i-Galaxy S7.
Umboniso kwiscreen ungaphezulu kokulungileyo, nangaphandle nangokubonakaliswa kwemibala esinokuthi imida ngokugqibelela. Ukongeza, amathuba amakhulu okuba Windows 10 Iselfowuni isinikeze ukuba sihlengahlengise kwaye sihlele amaxabiso obushushu kwimibala, yenza le Lumia 950, mhlawumbi ingasihendi nakanye ngaphandle kwescreen, kodwa ngayo.
Inzwa ye-megapixel eyi-20 ye-Pureview sensor ene-f / 1.9 ukuvula, isatifikethi se-ZEISS, uzinzo lwe-optical kunye ne-LED ephindwe kathathuEzona nkcukacha ziphambili zekhamera yangemva yale Lumia 950, ngokungathandabuzekiyo eyenza ukuba ibe yenye yezona zibalaseleyo kwintengiso nakwinqanaba elifanayo nezinye iiflegi ezikhoyo kwimarike yefowuni ephathekayo. Ewe ngelishwa, iMicrosoft ayinazo iinkcukacha zokucoca, njengokucotha okwenzeka ngamanye amaxesha kwaye kunokuvuka ngaphezulu komsebenzisi omnye.
Okucothayo kukho ngokukodwa kulungiso oluzenzekelayo lwasemva kwemifanekiso enokuthatha ukuya kuthi ga kwimizuzwana emi-5, ingqumbo yokwenene, ngakumbi ukuba sithathela ingqalelo ukuba ayenzeki kwezinye izixhobo eziphathwayo ezinekhamera eneempawu ezifanayo.
Apha sikubonisa ifayile ye- igalari yemifanekiso ethathwe ngekhamera esemva kwale Microsoft Lumia 950;
Kufuneka iqatshelwe ukuba iflegi yenkampani eqhuba ngempumelelo kaSatya Nadella ikwasivumela ukuba sithathe iifoto xa zishukuma, ngohlobo lweeFoto eziBukhoma ze-iPhone, kwaye inqaku elilungileyo elo, nangona loo nto ingeyiyo i-anecdotal .
Xa kuziwa urekhodo lwevidiyo, ikhamera yangasemva Le Lumia 950 isivumela ukuba sifake imifanekiso kwi-4K kwizakhelo ezingama-30 ngomzuzwana kwaye inendlela enomdla yokurekhoda ngokuhamba kancinci kwiiphikseli ezingama-720 kwii-120 fps.
Windows 10 Iselfowuni kubomi bemihla ngemihla
Le Lumia 950 sesinye sezixhobo zokuqala ukubetha emarikeni nge Windows 10 Iselfowuni njengenkqubo yokusebenza kwaye akukho mathandabuzo ukuba oku kuyinzuzo enkulu. Kwaye sijamelene nenkqubo yokusebenza kweeselfowuni eneempawu ezintle kwaye inika abasebenzisi izinto ezintle, ukhetho kunye nemisebenzi, kodwa okwangoku kukude kwinqanaba le, umzekelo, i-Android okanye i-iOS.
Ukungabikho kwezinye izicelo ezibalulekileyo kuyaqhubeka nokuba yenye yeengxaki ezinkulu ekufuneka beziswele bonke abasebenzisi kwaye iMicrosoft ayiphumelelanga ukusombulula kodwa ubukhulu becala iyanciphisa.
Phakathi kwezinto ezintle ze Windows 10 Iselfowuni kufuneka siqaqambise iziko lolawulo, izaziso, usetyenziso lweMicrosoft kunye nesikhangeli esitsha seMicrosoft Edge, ethi, njengenkqubo yokusebenza, isaswele iinkcukacha ezininzi kunye nokukhetha ukuphumeza.
Kwicala elingalunganga, sifumanisa ukungabikho kwezinye izicelo ezibalulekileyo, inqanaba eliphantsi labanye kunye nophuhliso oluncinci lwezona zinto zibalulekileyo okanye ukhetho.
Njengoko yayiqhele ukwenziwa esikolweni, inqanaba lale Windows 10 Iselfowuni inokuba yiProgresa ngokufanelekileyo, kunye neenketho zokufumana ibanga elifanelekileyo kungekudala.
Okwangoku zombini i-Lumia 950 kunye neLumia 950 XL zithengiswa kwimarike kwinani elikhulu leevenkile ezikhethekileyo, kokubini okwenyani kunye nokubonakalayo. Ngokubhekisele kwixabiso layo, sifumana iindlela ezahlukeneyo zokhetho kuba zombini iitheminali ziye zathwaxwa lixabiso ngokuqhubekayo ukusukela oko bafikelela kwintengiso.
Namhlanje, umzekelo kwiAmazon, singayithenga le nto I-Lumia 950 ye-352 euro
Ndihlala ndingumthandi omkhulu wazo zonke izixhobo eziphathwayo ezenziwa nguMicrosoft kwaye kufuneka nditsho njalo Ndonwabile ukukwazi ukuvavanya le Lumia 950, endikuxelele yona bendikulindele okungakumbi. Ayisiyiyo ukuba sijamelene ne-smartphone eyintsilelo yokwenyani, kodwa ukuba sikude lee noko kulindelwe ngabo beRedmond, oko kukuthi, isiphelo sendlela ekuthiwa sisiphelo esiphezulu esinokulwa ubuso ngobuso ngokukhangela okukhulu kweempawu zentengiso.
Kuyinyani ukuba inomdla ngokuqinisekileyo ukukwazi ukusebenzisa Windows 10 Iselfowuni kunye nazo zonke izibonelelo ezisinika zona, ngakumbi kubasebenzisi abasebenzisa Windows 10 kwiPC yethu. Nangona kunjalo, uyilo lwayo olubi, iingxaki zekhamera ngamanye amaxesha kwaye ngakumbi ukungabikho kwezinye izicelo, ezona zibalulekileyo nezaziwayo kwintengiso, zisishiya sinencasa emnandi emlonyeni. Le Lumia 950 ayisisixhobo esibi, kodwa iswele ukubetha kakhulu ukuba ibe yi-smartphone enkulu ekuthiwa kukuphela kwesiphelo.
IMicrosoft isendleleni elungileyo, kodwa ngaphandle kwamathandabuzo inokuninzi okuphuculweyo kwaye siyathemba ukuba ifowuni yeSurface ekulindelweyo (kuthiwa inokuthi ihanjiswe ngokusesikweni kwiiveki zokuqala zonyaka ozayo 2017) iphela ifikelela kwintengiso, Siza kuyenza ngokulungisa iimpazamo esizifumeneyo kule Lumia 950. Okwangoku uyilo lubonakala luqinisekile ukuba luza kulungiswa, kufuneka sazi kuphela ukuba nabaphi na abasebenzisi besixhobo esine-Microsoft operating system baya kuba Uyakwazi ukonwabela usetyenziso olufanayo njengabasebenzisi besixhobo esine-Android okanye i-iOS inkqubo yokusebenza.
Ubukho bendabuko Windows 10 Iselfowuni
Uyilo, kude noku kulindelwe isiphelo esiphezulu
Ucinga ntoni ngale Lumia 950 esiyihlalutye ngokubanzi namhlanje?. Sitshele kwisithuba esibekelwe ukuphawula kule post okanye ngenye yeenethiwekhi zonxibelelwano esikhoyo kwaye apho sinomdla wokuxoxa ngale nto kunye nezinye izihloko ezininzi nawe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » I-Lumia 950, i-smartphone elungileyo Windows 10 Iselfowuni kunokuba besilindele ngaphezulu
Kubonakala kum kuhlalutyo olulungileyo kuphela ndide ndibone ukuba awuzange uhlalutye ukusebenza kokuqhubeka endicinga ukuba yeyona nto iphambili kule fowuni. Kuya kufana nokuhlalutya i-galaxy s7 ngaphandle kokuqamba isikrini sayo esigobileyo okanye i-LG G5 ngaphandle kokungena kwiimodyuli. Ukubulisa.
Ewe, le yeyona fowuni intle endakha ndanayo ... kwaye bendine-iPhone kunye ne-Samsung ...
Ndiyamangaliswa kukuba wenza uhlalutyo lwesiphelo sendlela esiye kwimarike ngaphezulu kweenyanga ezi-6 ezidlulileyo kwaye ke ngenxa yoko imisebenzi yayo emininzi ayisafaniswa neetheminali ezisandula ukuphuma.
Kwelinye icala, xa uthetha ngescreen akucaci kum ukuba nge «le Lumia isinika iipikseli ezingama-564 nge-intshi, inani elikude lee nokusinika ezinye iiterminal» uthetha ukuba iLumia 950 kakhulu ephezulu kwi-dpi kunezinye iitheminali eziphezulu.
Kuyandothusa futhi ukuba awuthethi malunga nokuba sisiphelo sokuqala esinokupholisa ulwelo okanye ngenkqubo yokuqonda umsebenzisi we-iris, okanye umsebenzi wokuqhubeka, njengoko kubonisiwe kolunye uluvo.
Ndivumelana nawe Windows 10 kusafuneka kuphuculwe, kunye nomthamo wezicelo, nangona ndiyathemba ukuba yonke into izakufika, kunye nohlalutyo lweenjongo zabo bapapasha amanqaku.
UJose Calvo sitsho
Kwiintsuku ezi-4 ezidlulileyo ndithenge iLumia 950 XL kwaye ndonwabile kakhulu ngayo! ??
Phendula kuJose Calvo
Andabelani ngale ngxelo ikuluhlu okanye isifundo seLumia 920. Ndicacisa ukuba kutheni:
Ikhamera, ividiyo ye-4k, kunye nevidiyo ye-60fps, ngowona mgangatho mhle welensi kunye nolawulo lokugxila kuye nabani na onayo, yeyona nto ndiyibonileyo.
Windows 10 ngeThayile ezibukhoma, ndimisela iiakhawunti ze-imeyile ezi-5, kwaye ndilawula nganye nganye, ndifumana imveliso ephezulu kakhulu kunayo nayiphi na i-IOS okanye i-Android.
Abafowunelwa bavumelaniswe ngokuzenzekelayo ne-Facebook.
Ikhalenda ye-Innate Outlook kwiWindows ngokuvumelanisa ne-Twitter kunye ne-Facebook.
Ungqamaniso olungagungqiyo ne Windows 10 PC, Oko kukuthi, naluphi na utshintsho endilwenzayo kwiPC yam, luya kubonakala kwiselfowuni yam.
Iglasi yeGorilla 4, (Iselfowuni yam ilahliwe kumgama omkhulu, ngaphandle kwetyala, kwaye isikrini sihamba kakuhle)
Ukuchasana nomgangatho ophezulu kunye nendibano.
IOfisi Innato, endinawo onke amaxwebhu endiwagcinileyo ndaza ndawaxhasa kwi-OneDrive.
I-Onedrive 1T (yokuthengwa kweOfisi) apho ndigcina khona amaxwebhu am, iifayile, iifoto kunye nezinye phantse ngokungenasiphelo.
1 Tera sd, (Akunyanzelekanga ukuba ndicime nayiphi na imifanekiso kunye neevidiyo ezivela kwiWtsp)
Inani elingenasiphelo lemifanekiso eligcinwe kumgangatho ophezulu, kwiselfowuni nakwilifu.
Amandla angenasiphelo, ukwakha umgangatho, unyamezelo, eyona khamera, kunye nenkqubo yeshishini eqhuba kakuhle kwintengiso. Yeyona phakheji intle phaya ukuza kuthi ga ngoku, kwaye ndiyayonwabela. Ndinemveliso ngakumbi kunakuqala xa ndandisebenzisa i-iphone 6. Le yokugqibela yeyeselfowuni yabantwana nakwishumi elivisayo, hayi oosomashishini bokwenyani
Phendula uJuan Ramos
Zeziphi ii -apps ezibalulekileyo ezingekhoyo?
I-Samsung Galaxy Tab A ifika eSpain ngendlela esemthethweni
Ungayithenga njani kwiAmazon UK kwaye uthathe ithuba lokuwa kwesikiti